DOWLAD AAN DIBLOOMASIYA LAHAYN (M/weyne Farmaajo raadso cid kaala talisa international diplomacy) - Latest News Updates
DOWLAD AAN DIBLOOMASIYA LAHAYN (M/weyne Farmaajo raadso cid kaala talisa international diplomacy)
Dowladda ka dhisan Somaliya waa mid aad iyo aad uga arradan xagga dibloomasiyada iyo siyaasadda arrimahya dibadda. Ma jirto wasaarad shaqeysa oo u xil saaran arrimaha dibadda, waxaana nasiib darro ah in M/weyne Farmaajo uusan heysan cid aqoon leh ee kalatalisa arrimaha dibadda. Wax alla wixii tallaabooyin uu qaado waa kuwa u horseedadalka jaha wareer iyo xurguf aad u xoogan oo ka dhex dhalata dalalka aan xiriirka la leenahay.
Tallaabadi ay ka carootay Jabuuti waa mid ay xaq u leedahay, waayoo waxay naga filaneysay inaan la safanno oo aan uga hiilinno gardarrada Eritrea. Nasiib darro, M/weyne Farmaajo wuxuu garan waayay inuu tallaabo dibloomaasi oo deg-deg ah qaado inta uusan safiirki Jabuuti ka bixin Xamar, kana bixiyo cudur-daar inay arrinta uu ku kacay ay ahayd mid aan laga fiirsan laakin la sixi karo. Waxaa laga filaayay inuu M/wene Ismaacill Cumar Geelle u diro taleefan kana raalli geliyo khaladkii dhacay ooy sabab u ahayd khibrad yari iyo dibloomaasiyad gurracan. Cilaaqaatka Jabuuti nagala dhexeeya ma ahan mid ku saleysan siyaasad waayoo Jabuuti waxaa nahay walaalo aan sinnaba u kala go’i karin wax kasta oo dhaca…laakin aaway dadki intaas garan lahaa? Farmaajo waxaa la ceeb ah waa gefay!!!
Dhanka kale, wasaaradda arrimaha dibaddamaba shaqeyso mana jirto run ahaanti, waayoo wasaaradaha oo dhan waxaa awooda fulintafaraha ku haay R/W Kheyre oo wuxuu doonosameeya, cid la hadli karta oo wax u sheegikarta ma joogto meesha…waa dad dibadahalaga soo aruurshay oo socdal gaaban kumaraaya Xamar ama (transit). Midkii ugudambeeyay wuxuu ahaa Wasiirki Waxbarashadaoo ay ka wada yimideen Norway kaasoo lagu qanciyay inuu xoogaagi uu shaqshaqday iskaqaato kuna sabro, waana oggolaaday.. wuxuuse ku andacooday inuusan garan sababta loo casilay!! Wuxuu illaabay lacagtii uu ka xoogayardadi deeqaha waxbarasho dibadda u aadi lahaauu ka dhigtay sac asaga u irmaan uu mar kastaiska listo R/W Kheyre-na uu ka war haayo!!!
Ma laga yaabaa inuu M/weyne Farmaajo ka bixiyo raalli gelin ama uu socdaal deg-deg ah kuaado Jabuuti si loo saxo khaladaadka ay dowladiisu caadeysatay. Ma arki doonaa R/wasaare soo xula wasiiro xil qaadi kara oohowshooda u madax bannaan?.
Ma la arki doonaa dibloomaasiyiin u adeegadalkaan oo arrimaha dibadda ku soo celiyafulinta adeegyadi ay u xil-saarneyd?
MA JIRTO MEEL LAGA HELI KARO BAASABOOR SOOMAALI KII ITOOBIYANA MEESHI AAD TAGTO WAA KA HELEYSAA WAANA KU SIINAYAAN!!! YAABKA YAABKIISA1!!